UHunt uthi naye akasazi kwenzekani ngeChiefs - Impempe
UHunt uthi naye akasazi kwenzekani ngeChiefs
May 5, 2021 Impempe.com
UNdivhuwo Ravhuhali noReeve Frosler
Ukukhishwa ngekhadi elibomvu kukaNjabulo Blom esiwombeni sokuqala, nokudala iphenathi kukaSiyabonga Ngezana sekusele amanenjana umdlalo uphele yikho okushiye umqeqeshi weKaizer Chiefs, uGavin Hunt edidekile.
Lezi zinto yizo eziqhathe iChiefs nenduku kwiTshakhuma Tsha Madzivhandila emdlweni weDStv Premiership ePeter Mokaba Stadium ngoLwesibili – ishaywe ngo 2-1.
Amakhosi agileke igoda elingaqaqeki sekusele imizuzu emihlanu kuyiwe ekhefini ngesikhathi uBlom ekhonjwa ngaphandle kulandela ukuthola ikhadi lesibili eliphuzi.
Lokhu kuvulele iVhadau Vha Damani ithuba njengoba bese bezodlala nabantu abangasaphelele imizuzu engu-50 elandelayo.
“Kunzima ukuchaza lento, angazi (ngithini)… kuyaxaka kakhulu kodwa yize kunjalo ngibone sengathi besifanelwe wumphumela ongcono,” kusho uHunt ngemuva komdlalo.
“Senze amaphutha, futhi akwamukelekile ukuthi singenza amaphutha abucayi kanjeyana… kumele siqhubeke silwe,” kuqhuba yena.
Ngephenathi, okuyiyo abahlulwe ngayo njengoba idaleke sekubhekwe ukuba unondweba afuthe impempe iqembu ngalinye liphume nephuzu, uHunt usale edangele.
UThabo Mnyamane – obeliphela endlebeni kubadlali beChiefs – nguye ovalele enethini le phenathi nokube ngumnyakazo wokugcina kulo mdlalo.
“Ngumdlali oyedwa… (uNgezana nguye owadala iphenathi bebhekene neBloemfontein Celtic ngempelasonto edlule). Lokhu kuyanicindezela, akusizi neze. Kodwa ke okwenzekile sekwenzekile.
“Manje sekusele imidlalo emine okumele siyiwine yonke bese sibona lokho kuzosibekaphi. Bekungumdlalo ongenzima kuze kube sithola ikhadi elibomvu, kanti nendlela esivala ngayo emuva ayigculisi,” kuchaza uHunt.
IChiefs seyizoze ibuyele enkundleni ngoLwesibili oluzayo la izobhekana khona nomakhelwane bayo eSoweto, iSwallows FC.
UHunt uyalithokozela leli khefu elincane abazolithola ngoba lizobasiza ukukhokha umoya ngaphambi kwesikathi esinzima sokuphetha isizini.
“Leli yikhefu elide kunawo wonke esike saba nawo kusukela ngoDisemba. Sizozama ukuhlanganisa izinto bese sibuya sesingcono.”
Previous Previous post: LISENETHINI!: Lusigeze izinhliziyo Usuthu
Next Next post: Kuyaphela ukugaqela ngomqeqeshi weBafana?